Wuxi Innovate Machining Development Co., Ltd dia natsangana tamin'ny taona 2010 ary miorina ao Wuxi, tanàna tsara tarehy eo akaikin'ny Farihin'i Taihu. Orinasa teknolojia hi-tech ampidirin'ny R&D, ny famokarana, ny fizarana ary ny serivisy mifandraika amin'izany, izay manokana amin'ny famolavolana, famokarana. ary fametrahana fitaovana amin'ny kosmetika, fanafody, sakafo, indostria simika tsara, sns.
Amin'ny alàlan'ny fandovana ny fanamboarana fitaovana simika nentim-paharazana, dia mijery bebe kokoa ny fanatsarana, ny fanavaozana ary ny fampandrosoana ny teknolojia isika. Tsy afa-po intsony amin'ny vokatra tokana, mifantoka amin'ny volavolan-dalàna tsy fenitra sy ny tsipika famokarana feno izahay. ny mpanjifanay, ao anatin'izany ny famolavolana, ny fanamboarana ary ny fametrahana ny tsipika famokarana ho an'ny dingana manomboka amin'ny fiomanana ka hatramin'ny fonosana.
Ny fitaovantsika dia novokarina ambanin'ny IS09001: ny fenitra rafitra fanaraha-maso kalitao 2008, ny vokatra rehetra dia nahatratra ny fenitry ny kalitaon'ny GMP, vokatra marobe nohamarinin'ny CE.
Amin'ny alàlan'ny teknolojia vaovao, ny fanamboarana tanteraka ary ny serivisy mahazatra, ny orinasanay dia ankafizin'ny mpanjifanay tsara. Ny rafitra fitantanana kalitao / tontolo iainana / fiarovana dia manome fototra matanjaka ho an'ny fampandrosoana ny tsena, manarona ny mpanjifanay rehetra hankafizany ireo vokatra sy serivisy avo lenta.
Ny vokatray dia nampiasaina tamin'ny indostria marobe ary manompo mpanjifa amin'ny firenena maro manerantany.
Amin'ny maha SME teknolojia lehibe anay (orinasa kely sy salantsalany) nohamarinin'ny governemanta Provinsi Jiangsu, dia eo ambany fitomboana sy fampandrosoana haingana izahay, fampidirana telents siantifika sy teknolojia ary fitaovana avo lenta mba hahatanteraka ny vokatray. Andao hiara-hitombo sy hivoatra isika, hamorona toe-javatra mandresy ary handray anjara amin'ny orinasa sy ny fiaraha-monina!
Izahay dia nanitrikitrika hatrany ny fivoaran'ny vahaolana, nandany vola be sy loharanon'olombelona amin'ny fanavaozana ny teknolojia, ary nanamora ny fanatsarana ny famokarana, nahafaly ny hetahetan'ny fanantenana avy amin'ny firenena sy ny faritra rehetra.
Ny kolontsainay: Fanavaozana, fahamendrehana, fahazotoana, fahatsoram-po